XAYNDAAB ALWAAX AH: SIDA LOO SAMEEYO XAYAWAANKA GACMAHAAGA - INFRASTRUCTURE
Sida loo sameeyo xayndaabka xadiiqada
Xayndaab alwaax ah waa fikrad fiican guriga guryaha ama xagaaga xagaaga. Qalabkani wuxuu xaq u siinayaa guriga. Aan fiirino sida loo diyaariyo maaddada dabaasha iyo sida loo soo ururiyo.
Hoose, dhexdhexaad ah ama sare?
Sida caadiga ah, dayrka wickers ayaa loo qaybiyaa dhowr nooc oo ku xiran ujeedada. Naqshadeynta muuqaalka, dayrarka waxaa loo isticmaalaa walxaha qurxinta. dherer yar (ilaa 1 mitir): waxay ku xiran yihiin waddooyinka ku yaal goobaha iyo sariiraha ubaxa.
Halkii xayndaabka caadiga ah, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa dusha. Tani waxay ku habboon tahay: xannaannada, sauja, soodhada, boodhka, hawada, forsythia, privet, yew, barberry Turnn.
Si aad uqaybiso goobaha meelo yaryar, xayndaabku waa ku habboon yahay qiyaastii mitir dheer. Thanks to deyrka noocan oo kale ah, ma jiri doonto dareen ah meel bannaan oo ku yaal beerta, isla markaana waxay xoojin doontaa xuduudaha qaybaha.
Diyaarinta dusha sare ee goobtu waxay isticmaashaa dayrarka ballaadhan, qiyaastii laba mitir oo dherer ah. Iyadoo ku xiran hadba sida loo isticmaalo, xayndaabku wuxuu ku dhamaan karaa sanooyin kale. Tusaale ahaan, laga bilaabo cattail ama xayndaabkaaga xayndaabku wuxuu socon doonaa wax ka badan sanooyin yar. Si aad u sii dheeraato, illaa 10 sano, isticmaal sir, khudrad ama geedka canabka ah sida qalab loogu talagalay.
Waa muhiim! Haddii aad rabto in xayndaabku kuugu adeego xitaa wakhti dheer - waa inaad daaweysaa antiseptic.
Sida loo sameeyo xayndaab xayawaan ah
Marka xigta, tixgelin faahfaahinta walxaha laga yaabo inaad dooratid weelka iyo sida loola wadaago naftaada.
Astaamaha wax soo iibsiga
Diyaargarowgu waa ka fiican yahay guga ama dayrta. Laakiin haddii aad u baahan tahay si degdeg ah u samee xayndaabka, ka dib waxaad diyaarin kartaa laamaha xagaaga: iyaga waxay u baahan yihiin in ay qaataan si siman oo siman. Waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo mindi fiiqan si ay u soo ururiso geedka canabka ah iyo gooyay geedka canabka ah. Ka dib marka aad soo ururiso qadarka saxda ah ee sheyga, laamuhu waxay ku xiran yihiin xirmo oo la qalajiyey. Laamaha qallalan waxaa lagu kaydin karaa waqti dheer.
Ka hor inta aan la dhisin xayndaabka, laamaha ayaa caadka. Nidaamkani waxa uu siinayaa dabacsanaan, samaynta xayndaabka si fudud. Adigu ma kori kartid laamaha, iyo ku dheji afartooda biyo ah. Ku qooji laba toddobaad. Taas ka dib, way sahlan tahay in lagu duugo duufaan.
Haddii aad qorsheyneysey inaad xayndaab ka sameysid laamo la jarjaray, markaa waxaad ka bixi kartaa caleemaha. Taageerada xayndaabka waxaa badanaa laga sameeyaa laanta geed. Pre jilibka ayaa laga soo saarayaa, qaybta hoose ee laanteeda waxaa lagu daaweeyaa tar ama nooc kasta oo ka mid ah antiseptic. Tani waxaa la sameeyaa si loo yareeyo nidaamka dardar gelinta taageerada.
Si aad u dhisto xayndaab, waxaad u baahan tahay alaabo dabiici ah oo aan u baahnayn safarro dukaamada qalabka. Intaa waxaa dheer, dayrarka noocan oo kale ah kharash aad u jaban.
Wixii faaruq ah Isticmaal wikis dabacsan, cowska iyo alaabo kale. Lafaatiirta soodhada ayaa si gaar ah loo isticmaalaa, waxay leeyihiin awood sare waxayna ku koraan meel kasta, marka lagu daro, ha ka fekerin qaabka safka, maadaama nooc kasta oo geedkan ku haboon yahay daal.
Cirbadaha laga gooyo meelaha yaryar, badanaaba daadadku, waxay doortaan jilicsanaan, dhejisyo fara badan oo aan saameynayn cudurku. Goynta waxaa badanaa la sameeyaa horraanta gu'ga ama xilliga dayrta.
Ma taqaanaa? Xayndaabka ugu sareeya adduunka waxaa lagu dhisay Jamhuuriyadda Koonfur Afrika 80-kii qarnigii 20aad: waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo taangiyada saliidda ee weerarrada gantaalada ee argagixisada oo gaarey 290 mitir.
Ka dib markii la jarjarey, xir xidhmooyinka maqaarka yar, taas oo markaa waa in la qalajiyaa ka yar cirifka roogaga. Meel muhiim ah diyaarinta maaddada waa xulasho sax ah dhererka geedka canabka ah. Waxaad isticmaali kartaa nalka kale si qiyaas ah.
Xayndaabka khafiifka ah ee muhiimka ah waa nidaamyada taageerooyinka, kuwaas oo inta badan laga samaysto laamo waaweyn (geedo yar yar) ugu yaraan afar sentimitir dhexroor. Heerka taageerooyinkaas oo kale waa inay ahaadaan 50 sentimitir dherer ah, sababtoo ah dhamaadka taageerooyinka waxaa lagu riixaa dhulka. Waa hagaagsan tahay geedkan geedo culus oo qaro weyn leh, oo hoos u xoqaya hoosta kuna sii qulqulaya dhulka.
Waxaad isku dhafan kartaa xaydaanka dushiisa, isku dhafka dhirta kala duwan, tusaale ahaan: qoob-ka-soo-saarka, fedoorka, jeexan, delphinium, asters, tulips, asilbood, peonies. Laga soo bilaabo sanadlaha ubaxa dahlias, marigolds, petunias, begonia, verbena arki doonaa qurux badan.
Habka loo xakameeyo
Nidaamka walxaha dhaqdhaqaaqa ma aha mid aad u adag - baararka horay loo diyaariyey waa inuu ahaado waxay u dhexeysaa taageerooyinka kala duwan. Qeybta hoose ee geedka canabka ah waa in lagu xaqiijiyaa dhamaadka dhulka ilaa 15 sentimitir, ama adoo ku dhejinaya masruufka. Dheeraad ah, waaxaha soo haray ayaa si fudud loogu xiri karaa taageerada ama qaabka isticmaalka silig.
Laanta lakabka xaydhku waxay yeelan doontaa dhoobo iyo dhumuc khafiif ah, mid ka mid ah kan ugu dhawaa sareeya. Waxaa lagama maarmaan ah in si sax ah loo soo saaro laanteeda ilaa dhammaadka qaraxa, laakiin dhamaadka dhuuban ayaa lagu hareereysan yahay taageerada u dhaxeysa laamaha horay loo dhigay.
4 kastood oo geedo ah oo la duldhigay waa in lagu xiraa lowska si loo xiro weelka. Haddii aad isticmaasho cawska ama xayawaanka si aad u xiirto, xiro xirmooyinka 5-6 calsan leh, albaabada dhirta waa in la gooyaa horay.
Waa muhiim! Meelaha iyo jarjarada xayndaabka xayndaabku waa in laga tago gudaha. Haddii aad rabto in xayndaabku waqti dheer sii socdo - waa in la gooyaa.
Dhammaan dhinacyada dhulka lagu riixi doono waa in la xoojiyaa iyadoo la daaweynayo taageerooyinka adoo burinaya, dabka ama rinjiga. Qalabka ugu fiican taageerada larch. Sababtoo ah xaqiiqda ah in aysan walaaqin xataa biyaha, dhammaan Venediska waxaa lagu dhisay.
Haddii aad qorsheyneysid inaad xayndaabka dhererka ku dhejiso dhererka, waa inaad ku aasaa taageerooyinka 30 sentimitir dhulka, xayndaabka sare, waxaad u baahan doontaa aaska badan. Haddii aad isticmaasho haanta yaryar ee naqshad dejinta, waxaad u baahan tahay inaad qoto dheereyso taageerooyinkooda ugu yaraan 20 sentimitir.
Miyay tahay si loo doorto masaafada u dhexeysa taageerooyinka, taas oo ku xirnaan doonta dhumucda ulaha. Haddii laamaha xayndaabka xayndaabku weynaan doonaan, masaafada u dhexeysa taageerooyinka waa in laga tagaa 50 sentimitir.
Waxaa lagugula talinayaa in aad masaafada u dhexeyso taageerooyinka oo dhan xayndaabka oo dhan, kudhif oo kaliya taageerada taageerada fogaan ah 20 sentimitir oo midba midka kale ku yaala geesaha dusha. Xiritaanka hareeraha geesaha wuxuu ku sugnaan doonaa geedka canabka ah xilliga dheeraadka ah.
Ma taqaanaa? Waqtiga qadiimka ah, palisade qowlka ayaa loo dhisay sidii qalab ku-meel-gaadh ah oo hareeraha hareeraha loo dhisay iyo qalcado la dhisay ilaa derbiyada dhagax la dhisay.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah dayactir xafiisyo. Dhammaan noocyada iyo foomamku waxay leeyihiin faa'iidooyin iyo faa'iido gaar ah.
Faa'iidooyinka dayrka wickerka:
Naqshad qurux badan oo asal ah. Deedka noocan oo kale ah oo ku wareegsan guriga ama qulqulka wuxuu abuuraa muuqaal muuqaal leh oo qurux badan.
Maaddaama muuqaalada gaarka ah ee golaha iyo rakibidda, waxaa suurtagal ah in lagu qalabeeyo xayndaab kasta, tusaale ahaan, mid curvilinear ah.
Qalabyada xayeysiinta ee loo yaqaan 'ecco-friendly' waxaa loo isticmaalaa dhismaha daaqada, sida geedka canabka ah iyo laamaha kale waa wax caadi ah oo dabiici ah.
Faa'iido dheeri ah waa sahlanaanta arinta iyo rakibidda. Iyada oo xayndaabka noocan oo kale ah ayaa keligood xejin kara caawinaad la'aan.
Xayndaabkani waa miisaaniyad. Si aad u dhisto, uma baahnid inaad iibsato alaabta dhismaha, sida aad u baahan tahay inaad isticmaasho geedka canabka ah ama laamaha kale ee aad isu diyaarin karto.
Duufka noocan oo kale ahi waa muraayad, maaha caasimad, mana ka horjoogsan karo gardarrada denbiilayaasha.
Xayndaabkani ma aha mid ku habboon goobaha leh guryaha sare ee tiknoolajiyada ama naqshado kale oo cusub. Waxaa loogu talagalay oo keliya qaabka rustic ah.
Deedka noocan ah waa halis dab ah.
Dhismaha noocan oo kale ah waa muddo gaaban - ugu badnaan nolol 7 sano.
Deedka this waa adag tahay in la dayactiro. Haddii aag yar ama hal laan ah uu waxyeello u geysto, xayndaabka oo dhan waa in la gooyaa goobta la rabo.
Iyadoo dadaal yar, waxaad si sahlan oo dhakhso ah u dhisi kartaa xayndaab oo ku siin doona goob dabiici ah oo abuuraya jawi soo dhaweyn leh. Goobta noocan oo kale ah ayaa ah mid fudud oo lagu rakibo, laakiin sidoo kale kharashka jaban.